Sajhasabal.com |विदेशी मुद्राको विनिमयदर आज कति छ ? हेर्नुहोस्
विदेशी मुद्राको विनिमयदर आज कति छ ? हेर्नुहोस्
साउन १८, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार (साउन १८) मा जारी गरेको विनिमयदरका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै, युरो एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसैगरी, पाउण्ड एकको खरिददर १५६ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर १५७ रुपैयाँ ५५ पैसा रहेको छ ।
यसैगरी, मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर २८ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ। यता, कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको छ । र, युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ ।